युरोप वा युरोपविरोधी ? - Karobar National Economic Daily
युरोप वा युरोपविरोधी ?
query_builderMarch 17, 2017 11:00 AM supervisor_accountमाइकल स्पेन्स visibility162
एक जना जानकार मेरा साथीले हालै मलाई सोधे— अमेरिकाबाट कसैले उल्लेख्य रूपमा इटालीमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तपाईं के सुझाव दिनुहुन्छ ? मैले जवाफ दिएँ— कम्पनी तथा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि त्यहाँ प्रशस्त अवसर छन् तर समग्र लगानी वातावरण भने जटिल छ ।
म कुनै जानकार आन्तरिक व्यक्तिलाई साझेदार बनाएर लगानी गर्न सुझाव दिनु उपयुक्त ठान्छु, जसले त्यहाँको पद्धतिलाई हातमा लिन सक्छ र अदृश्य जोखिमलाई देखेको छ ।
वास्तवमा यस्तो सल्लाह चीन, भारत, ब्राजिलजस्ता धेरै देशका लागि उपयुक्त हुन्छ । तर, युरोजोन भने दुई तीव्र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन भइरहेको छ र राजनीतिक असरले लगानीकर्ताहरूको चासो बढाएको छ ।
हालै भएको उच्च तहको लगानी सल्लाहकारहरूको बैठकमा एक आयोजकले सोधे— के युरो पाँच वर्षपछि अस्तित्वमा रहला ? युरोपको विद्यमान आर्थिक अवस्थाका सन्दर्भलाई २ सय जनामध्ये एक जनाले मात्रै जोखिमको प्रवृत्तिलाई मूल्यांकन गरेको पाइयो ।
अहिले इटालीको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (मुद्रास्फीति संयोजनसहित) करिब २००१ को तहमा पुगेको छ । स्पेनले राम्रो गरिरहेको छ, तैपनि यसको जीडीपी अझै पनि २००८ तिरको जति छ ।
फ्रान्ससहित दक्षिण युरोपेली देशहरूले ज्यादै कमजोर किसिमले आर्थिक पुनरुद्धार गरिरहेका छन् । ३० वर्षभन्दा मुनिका १० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरू बेरोजगार छन् ।
देशको ऋण (सरकारले विदेशी मुद्रामा प्रवाह गरेको ऋण) को तह जीडीपीको शतप्रतिशत पुगेको छ अथवा नाघेको छ ।
(इटालीको ऋण जीडीपीको १ सय ३५ प्रतिशत पुगेको छ) मुद्रास्फीति र वास्तविक वृद्धि दुवै तथा न्यूनतम वृद्धि पनि न्यून नै छ । वृद्धिलाई पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्ने वित्तीय उपाय प्रयोग गर्ने सामथ्र्यलाई यस्तो सुस्त ऋणले खुम्च्याइदिएको छ ।
एउटै मुद्रा सुरु भएयता सुरु भएको विचलनका साथै युरोजोन अर्थतन्त्रको व्यापार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकतामा व्यापक विविधता पाइन्छ । युरोमा अहिले देखिएको कमजोरीले यी विचलनमध्ये केहीलाई कम गर्नेछ । जर्मनीमा ठूलो बचत जारी रहनेछ ।
जहाँ श्रमको उत्पादकत्व अनुपात बढी छ त्यहाँ व्यापारबाट अपर्याप्त वृद्धि उत्पादन भइरहन्छ । २००८ को वित्तीय संकट भएयता परम्परागत विवेकका कारण युरोजोन अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारको कठिन यात्रा बलियो वृद्धितर्फ लाग्न सक्छ । तर, यो भनाइले विश्वसनीयता गुमाउँदै छ । सुस्त पुनरुद्धारभन्दा पनि युरोप अर्धस्थायी प्रकृतिको न्यून वृद्धि सन्तुलनको धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
भूमण्डलीकरण, अटोमेसन र डिजिटल प्रविधिले अघि बढाएको रोजगार र आम्दानीको ध्रुवीकरणबाट देखा परेको वितरणसम्बन्धी प्रभाव युरोजोनभित्रका देशहरूको सामाजिक नीतिहरूमा परेको छ । तर, यी देशहरू (र अरू धेरै देशहरू पनि) २००० सालदेखि यता विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने मुख्य तीन परिवर्तनबारे सचेत हुनैपर्छ ।
पहिलो र आफ्नै नजिक देशभित्रको कुरा हो : वित्तीय र नियामक एकीकरणको पूरकबिना युरोको प्रारम्भ गरिएको थियो । दोस्रो, चीन विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भयो र विश्व बजारसँग अन्य देशभन्दा बढी एकीकृत हुन पुग्यो ।
त्यस्तै तेस्रो प्रभाव हो, डिजिटल प्रविधिले आर्थिक संरचना, रोजगारी र विश्व आपूर्ति प्रणालीमा आजसम्मकै सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्न सुरु ग-यो । यसले विश्वको रोजगारीको प्याटर्नलाई नै पूर्ण रूपमा बदल्यो र परम्परागत कामको क्षतिको गतिलाई तीव्र पा-यो ।
त्यसको लगत्तै २००३ र २००६ को बीचमा जर्मनीले संरचनात्मक लचकता र प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धिका लागि दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रम लागू ग¥यो । २००५ मा मल्टिफाइबर एरेन्जमेन्ट (एमएफए) खारेज गर्याे ।
एमएफएले १९७४ देखि कपडा र गार्मेन्टका निर्यातका लागि कोटाको व्यवस्था गरेको थियो, जसले टेक्सटाइल उत्पादनमा चीन र अझ अचम्मसँग बंगलादेश व्यापक रूपमा केन्द्रित भए । २००५ मा मात्रै चीनले पश्चिमी देशमा गर्ने टेक्सटाइलको निर्यात दोब्बर पार्याे । यो विकासले युरोपको निर्धन क्षेत्र र कम प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका विश्वका विकासशील देशमा उल्टो प्रभाव पर्याे ।
यी परिवर्तनले धेरै देशको वृद्धिको प्याटर्नमा असन्तुलन सिर्जना गर्याे । कुल मागलाई अल्पकालीन सम्बोधन गर्न धेरै देशले विभिन्न उपाय अपनाए, जसले सोभरेन ऋण बढायो र ऋणले घरजग्गा कारोबारको फोका विस्तार गर्याे । यी वृद्धिका प्याटर्नहरू अस्थिर थिए र जति बेला यो भत्कियो लुकिरहेका संरचनात्मक कमजोरीहरू खुला देखिए ।
विद्यमान प्रणालीको अवरोध अहिले बढ्दो छ । बेलायतको ब्रेक्जिट जनमत–संग्रह र डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको दुवै घटनाले विद्यमान वृद्धि प्याटर्नले निम्त्याएको वितरणात्मक प्रवृत्तिप्रतिको असन्तोषलाई संकेत गर्याे ।
र, लोकप्रियतावादी, राष्ट्रवादी र युरोविरोधी दलहरूप्रति बढ्दो समर्थनले युरोपका साथै युरोजोनभित्रका फ्रान्स र इटालीजस्ता देशका लागि अझ बढी मात्रामा गम्भीर चेतावनी दिएको छ ।
यी दलले निकट भविष्यमै निर्वाचनमा जित्लान् वा नजित्लान्, तर यिनीहरूको प्रादुर्भावले युरोको दीर्घकालीन भविष्यप्रतिको आशावादी दृष्टिकोणमा भने शंका उब्जाएका छन् ।
युरोका विरोधी राजनीतिक शक्तिहरू स्पष्ट रूपमा निर्वाचनका लागि आधार बनाउँदै छन् र जति बेलासम्म वृद्धि रोगको सिकार भइरहन्छ र बेरोजगारी बढिरहन्छ उनीहरूले बलियो आधारभूमि पाइरहनेछन् । यसैबीच, ईयूले छिटै नै कुनै पनि महत्पूवर्ण नीति अथवा संस्थागत सुधार गर्ने सक्ने देखिँदैन । नेदरल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स र सम्भवतः इटालीमा समेत नजिकिँदै गरेको महतत्वपूण निर्वाचनमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्ने उनीहरूमा डर छ ।
वास्तवमा ब्रेक्जिट, ट्रम्पको निर्वाचन र लोकप्रियतावादी तथा राष्ट्रवादीहरूको दलको उदयबारेमा वैकल्पिक विचार लिइएको देखिन्छ । यिनीहरूले खतराको घण्टी बजाइसकेका छन्, तर यिनले युरोपलाई व्यापक एकीकरण र वृद्धिमुखी नीतिहरूतर्फ अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछन् ।
हरेक देश आफ्नो घरभित्रको मामिलाका लागि ईयूको मौद्रिक, वित्तीय र नियमनका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आफैं जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विचारलाई ईयूका नीतिनिर्माताहरूले परित्याग गर्न आवश्यक बनाउन सक्छ ।
ईयूका नियम अपनाउनु व्यावहारिक छैन किनभने विद्यमान प्रणालीमा प्रशस्त अवरोधक छन् र केही प्रभावकारी संयोजन संयन्त्र रहेका छन् । निश्चय नै वित्तीय, संरचनात्मक र राजनीतिक सुधारहरू व्यापक रूपमा आवश्यक हुन्छ । तर, ती युरोपको वृद्धिका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैनन् ।
यी सबै विषयको तीतो यथार्थ के हो भने युरोजोनका देशहरूसँग व्यापक र विविध क्षेत्रमा असंख्य वृद्धिको सम्भावना छ । यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नुको सट्टा तिनीहरूले सामान्य रूपमा प्रणालीगत अवरोधहरूलाई खुकुलो बनाउनु आवश्यक छ ।
युरोपको भविष्यलाई सुस्त गतिको रेलडब्बाको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । के नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरूले बलियो एकीकरण र समावेशी वृद्धिका लागि बलियो आधार देलान् त ? के भन्नचाहिँ कठिन छ भने म र अरूले पनि सम्भावनाको अन्त्य गर्न भने सक्दैनौं ।
एउटा कुरा भने स्पष्ट नै देखिन्छ : यथास्थिति अस्थिर छ र अनन्त कालका लागि यसलाई राखिराख्न पनि सकिन्न । नीतिहरूमा उल्लेख्य परिवर्तन र आर्थिक मार्गको अभाव भएको अवस्थामा अमेरिका र बेलायतमा भएजस्तै राजनीतिक चक्रव्यूह तोड्नेहरूको खुट्टा तानिन सक्छ ।
(माइकल स्पेन्स अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् । उनी एनवाईयूको स्टर्न स्कुल अफ बिजनेसको प्राध्यापकका साथै हुभर इन्स्टिच्युसनका सिनियर फेलो पनि हुन् ।)